Hanti-dhawraha oo su’aalo weydiiyey wasiirka uu R/W Rooble shaqada ka joojiyay | Onkod Radio
Hanti-dhawraha oo su’aalo weydiiyey wasiirka uu R/W Rooble shaqada ka joojiyay
Muqdisho (Onkod Radio) — Xubno ka socday Hanti-dhawrka Guud ee Qaranka ayaa maanta la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda, Cabdisaciid Muuse Cali ee dhawaan shaqada uu ka joojiyay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Kulanka Cabdisaciid iyo xubnaha ka socday Hanti-dhawrka Guud ee Qaranka ayaa yimid kadib markii uu Ra’iisul Wasaaraha dalbaday in Hanti-dhawrka iyo Hay’addaha amnigu ay baaritaan ku sameeyan tallaabooyinka Wasiirka, gaar ahaan fasaxida Markab siday dhuxul sharci daro ah.
Wasiirka shaqada laga joojiyay ayaa dhankiisa xaqiijiyay kulankaan, isaga oo qoraal uu soo saaray ku yiri “Maanta waxaan kulanay xubno ka socda Xafiiska Hantidhawrka Guud ee Qaranka. Waxaa ka wada-hadalnay sida ay wax u jiraan. Waxaana ka warsugaynaa wixii ka soo baxa.”
24-kii bishaan ayay aheyd markii uu Ra’iisul Wasaar Rooble shaqo joojin ku sameeyay Wasiirka Arrimaha Dibedda, sidoo kalena uu baabi’iyey warqad wasaaradda Arrimaha dibadda ay ku fasaxday Markab waday dhuxul sharci daro ah oo ku xirnaa xeebaha dalka Cumaan.
Arrimahaan ayaa imanaya kadib markii uu Rooble sharci darro ku tilmaamay shaqaalaha Wasaaradda ee la bedelay ama shaqada laga qaaday laga soo bilaabo kowdii Janaayo 2022, uuna amray in shaqaalahaas dib loogu fasaxo howlahooda, dibna loogu celiyo goobihii iyo xafiisyadii ay ka shaqeynayeen.